आफ्नै बाबुबाट ब;;ला;;त्कृ;;त गुल्मीकी बालिका भन्छिन् : आमा नि;दाए पछि मेरो बि;स्तरामा आउनुहुन्थ्यो । – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ३०, २०७७ समय: २०:०४:५३
त्यस परिवारको जिविका चलाउने मुख्य पेशा बनाउदै आएका थिए बाबुले धा;;मी काम तर त्यसको क;माई पनि जा;;ड र;;क्सि;मा खर्चिदा आमा नि;मे;क मजदुरीमा नगए चु;लो चल्न मु;स्किल । शुक्रवार गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास भित्रै बाबू द्धारा १४ बर्षिया छोरी प;टक प;टकको
बि;कृ;ति, बि;स;ङ्ग;तिको अ;ख;डा ठा;नेर छिमेकीले वा;स्तै नगर्ने गरेको पाइयो । तीन चार दिन यता बाबुले छोरी ग;;र्भ;धा;रण गराएको कुरा बाहिरिए पनि छिमेकिहरु हामी पुगे पछि मात्र त्यस घरमा पुगे । घ;र्मियाममा पनि बिहान बेलुका न्यानो कपडा लगाउनु पर्ने तम्घासको चिसो मौसम । त्यस माथी रेसुङ्गा लेकको काखमा ओ;से;प लाग्ने उनी बस्ने झुपडी ।
छोरी मा;थी बा;बुले पट;क पट;क ब;;ला;त्का;;र हुँदा तपाईले किन नि;ग;रा;नी गर्नु भएन ? भन्ने प्रश्नमा उनको एक ठस्को जवाफ थियो ! खै मैले थाहै पाइन । त्यस पछि पी;;डि;;त छोरीलाइ सोधियो । उनले भनिन ‘१३ वर्षको उमेर देखि बाबुले सधै कु;;क;;र्म गर्दै आउनु भएको थियो । उहाँ त्यो प;ल्लो बिस्त;रामा सु;त्नु हुन्थ्यो ।